Zekaraya 6 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
6 M wee lelie anya m ọzọ hụ; ma, lee! e nwere ụgbọ ịnyịnya anọ si n’agbata ugwu abụọ na-abịa, ugwu ndị ahụ bụkwa ugwu ọla kọpa. 2 Ịnyịnya ndị na-acha ọbara ọbara+ dọkpụ ụgbọ ịnyịnya nke mbụ; ịnyịnya ndị na-eji oji+ dọkpụ ụgbọ nke abụọ. 3 Ịnyịnya ndị na-acha ọcha+ dọkpụkwa ụgbọ nke atọ; ịnyịnya ndị tụrụ akịka, bụ́ ndị tụrụ àgwà,+ dọkpụ nke anọ. 4 M wee jụọ mmụọ ozi ahụ nke na-agwa m okwu, sị: “Gịnị bụ ihe ndị a, onyenwe m?”+ 5 Mmụọ ozi ahụ wee zaa m, sị: “Ha bụ mmụọ anọ+ nke eluigwe, ndị na-apụ+ mgbe ha guzochara n’ihu Onyenwe+ elu ụwa dum.+ 6 Ma nke ahụ ịnyịnya ndị na-eji oji dọkpụ na-aga n’ala dị n’ebe ugwu;+ ndị nke ahụ na-acha ọcha ga-aga n’azụ oké osimiri; ndị nke ahụ tụrụ akịka ga-aga n’ala dị n’ebe ndịda.+ 7 Ndị nke tụrụ àgwà+ ga-apụ gaa n’ebe e kenyere ha wee na-ejegharị n’ime ya, iji gagharịa n’elu ụwa.”+ O wee sị: “Gawanụ, jegharịanụ n’elu ụwa.” Ha wee malite ijegharị n’elu ụwa. 8 O wee tikuo m, sị m: “Lee, ndị nke na-aga n’ala dị n’ebe ugwu bụ ndị nke meworo ka mmụọ+ Jehova dịrị n’ala dị n’ebe ugwu.”+ 9 Okwu Jehova wee ruo m ntị ọzọ, sị: 10 “Nata ndị a dọọrọ n’agha ihe,+ ya bụ, Heldaị na Tobaịja na Jedeya; gị onwe gị ga-abatakwa n’ụbọchị ahụ, ị ga-abata n’ụlọ Josaya nwa Zefanaya,+ gị na ndị a si Babịlọn lọta. 11 Were ọlaọcha na ọlaedo mee nnukwu okpueze+ ma kpuwe ya n’isi Jọshụa+ nwa Jehọzadak bụ́ nnukwu onye nchụàjà. 12 Sịkwa ya,“‘Nke a bụ ihe Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru: “Ọ bụ nwoke a+ ka aha ya bụ Ome.+ Ọ ga-esi n’ọnọdụ ya pulite, ọ ga-ewukwa ụlọ nsọ Jehova.+ 13 Ya onwe ya ga-ewu ụlọ nsọ Jehova, ya onwe ya kwa ga-eburu ebube ya;+ ọ ga-anọdụ n’ocheeze ya wee na-achị, ọ ga-aghọkwa onye nchụàjà n’ocheeze ya,+ a ga-enwekwa nkwekọrịta+ n’ọrụ abụọ ahụ. 14 Nnukwu okpueze ahụ ga-abụrụ Hilem na Tobaịja na Jedeya+ na Hen nwa Zefanaya ihe ncheta+ n’ụlọ nsọ Jehova. 15 Ndị nọ n’ebe dị anya ga-abịa soro wuo ụlọ nsọ Jehova.”+ Unu ga-amarakwa na ọ bụ Jehova nke ụsụụ ndị agha zitere m ka m bịakwute unu.+ Ọ ga-eme, ma ọ bụrụ na unu egee ntị n’olu Jehova bụ́ Chineke unu.’”+